Pipe Hangers Factory, Suppliers - China Pipe Hangers Manufacturers
Ribbed arịọnụ Kedo akwa
Dị ka otu n'ime ndị na-asọmpi ụlọ ọrụ kachasị asọmpi, a na-emepụta mpempe akwụkwọ anyị maka itinye ihe nkwụnye ma ọ bụ mkpanaka nkwado na osisi, ụlọ, ma ọ bụ mgbidi. Ha anatawokwa nnukwu ewu ewu na gburugburu ụwa, ọkachasị na North America, South America, Middle East na Asia.
Ọla kọpa Light Light Ọrụ Clevis hanger maka Factory Direct Sales
Dị ka otu n'ime ndị kasị asọmpi hangers nke ụlọ ọrụ, anyị ọla kọpa plated ọkụ ọrụ clevis hangers natara a ukwuu nke ewu ewu gburugburu ụwa, karịsịa na North America. Ọzọkwa, enwere ike ịhazi ha dịka ihe ị chọrọ, dịka ọmụmaatụ, enwere ike iji ya rụọ roba, tinye ma ọ bụ ọta. Ma enwere ọgwụgwọ dị iche iche dị iche iche maka nhọrọ gị: A ga-ebu ya ụzọ, zinc plasta, epoxy na Green kpaliri iji mezuo mkpa gị dị iche iche.
Dị ka otu n'ime ndị kasị asọmpi hangers nke ụlọ ọrụ, anyị plastic tube insulators bụ UPC mma. Ha enwetakwala nnukwu ewu ewu n’ụwa niile, tụmadị na North America. Ọzọkwa, ọgịrịga ha na-ekwe ka ọkpọkọ na-efegharị nwayọ ma nwayọ nwayọ mgbe ọkpọkọ ahụ na-abawanye ma na-agbatị.
Ndenye kpochidoro Pipe mwekota na Rubber
Dị ka otu n'ime ndị na-asọmpi ụlọ ọrụ kachasị asọmpi, ihe nkedo ngwa ngwa anyị na-ejide ngwa ngwa nwere EPDM roba mkpuchi maka mbelata mkpọtụ na-akwado DIN 4109. Ha anatawokwa nnukwu ewu ewu na gburugburu ụwa, karịsịa na Europe, Middle East na Asia. Ọzọkwa, ha dị mfe iji otu aka mechie.
Ọla kọpa-ihe mkpuchi ọla kọpa maka Suspending Stationing Non-insulated Pipelines
Dị ka otu n'ime ndị kasị asọmpi hangers nke ụlọ ọrụ, anyị ọla kọpa mgbịrịgba hanga na-iji kwụsịtụ anyịnya na-abụghị gwara mmanụ pipelines. Ha enwetakwala nnukwu ewu ewu n’ụwa niile, tụmadị na North America. Ọzọkwa, ha gụnyere kposara abụọ na ihe nkedo na-arị elu.
Ọrụ dị arọ U-eriri na mkpuchi Rubber
Dị ka otu n'ime ndị kasị asọmpi hangers nke ụlọ ọrụ, anyị oké ọrụ u-straps na roba lining na-e na-atụ aro maka arịọnụ nke a gwara mmanụ ma ọ bụ ndị na-abụghị gwara mmanụ ọkpọkọ, na ike ga-eji na roba akwado inserts. Ha anatawokwa nnukwu ewu ewu na gburugburu ụwa, ọkachasị na North America, South America, Middle East na Asia. Ọzọkwa, e nwere ọgwụgwọ dị iche iche dị elu maka nhọrọ ị ga-ahọrọ: Nke nwere ike ịmalite, Zinc plated, epoxy na Green kpaliri iji mezuo mkpa gị dị iche iche.
Dị ka otu n'ime ndị kasị asọmpi hangers nke ụlọ ọrụ, anyị waffle pad e mere na-wuru mmiri mmiri iko. Ha anatawokwa nnukwu ewu ewu na gburugburu ụwa, ọkachasị na North America, South America, Middle East na Asia. E wezụga nke ahụ, ha dị mfe ịwụnye ubi.
UL & FM Ndepụta Swivel Ring hanger maka Factory Direct Sales
Dị ka otu n'ime ndị na-asọmpi egwuregwu nke ụlọ ọrụ, ndị na-agbanye mgbanaka anyị na-akwado UL & FM. Ha anatawokwa nnukwu ewu ewu na gburugburu ụwa, ọkachasị na North America, South America, Middle East, Europe na Asia. Ọzọkwa, enwere ike ịhazi ha dịka ihe ị chọrọ, dịka ọmụmaatụ, enwere ike iji ya rụọ roba, tinye ma ọ bụ ọta. Ma enwere ọgwụgwọ dị iche iche dị iche iche maka nhọrọ gị: A ga-ebu ya ụzọ, zinc plasta, epoxy na Green kpaliri iji mezuo mkpa gị dị iche iche.
UPC Plastic Ọkara mwekota
Dị ka otu n'ime ndị kasị asọmpi hangers nke ụlọ ọrụ, anyị plastic ọkara clamps bụ UPC mma. Ha enwetakwala nnukwu ewu ewu n’ụwa niile, tụmadị na North America. Ọzọkwa, ntinye ahụ dị ngwa ma dịkwa mfe.
Ndenye kpochidoro Pipe mwekota
Dị ka otu n'ime ndị kasị asọmpi hangers nke ụlọ ọrụ, anyị ngwa ngwa kpochidoro anwụrụ clamps bụ ngwa ngwa ntọhapụ gbawara n'etiti anwụrụ clamps na otu ịghasa. Ha enwetakwala nnukwu ewu ewu n’ụwa niile, ọkachasị na Europe, Middle East na Asia. Ọzọkwa, ha dị mfe iji otu aka mechie.